Soosaarayaasha Tooska ah iyo Soosaarayaasha Meel-qaboojiyaha Tooska ah
PVC Meegaarka Mini Firinjeerka Glass Door
YB PVC Frame Mini Fridge Glass Door wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB PVC Frame Mini Fridge Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Iridda Dahabka Dahabka ah ee Dahabiga ah
YB Rose Gold Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarxin-caddeyn iyo adkeysashada muraayadda gawaarida. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Rose Gold Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Iridda Muraayadda Cabitaanka Tooska ah
YB Xaqiijinta Cabitaanka Meel-qaboojiyaha Muraayadda ah ayaa adeegsanaya muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortaga, caddayn qarax iyo adkeysiga muraayadaha baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Tooska ah Cabitaanka Meel-qaboojiyaha Muraayadda ah wuxuu dabooli karaa shuruudda heerkulka laga bilaabo 0 10 -10 ket, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Albaabka Meherka Muraayadaha Muraayadaha
YB Beverage Cooler Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortaga, astaamaha qarxa oo adkeysanaya muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. Albaabka muraayadda qaboojiyaha cabitaanka ee YB wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -10 ℃, goomaatada leh birlabta birlabta waxay ka hortagi kartaa baxsiga hawo qabow iyo awood-karti badan Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Dhex-dhex-dhexaad ah, Kudar, Gacmo buuxa oo buuxa ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Cabitaanka Mini Qaboojiyaha Glass Door
YB Beverage Mini Friji Glass Door wuxuu adeegsanayaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortaga, astaamaha qarxa oo adkeynaya muraayada hore ee gaariga. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Beverage Mini Friji Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo 0 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood wax ku ool badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Black Frame Qaboojiye Glass Glass
YB Black Frame Fridge Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-cadeyn la aan adkeysiga muraayadaha gaariga. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Black Frame Fridge Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnetic xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.
Albaab Albaab Muraayad Bright ah
YB Bright Sliver Glass Door waxay isticmaaleysaa muraayadda la-casriyeeyay ee muraayadaha Low-E, taas oo ah shil kahortag, qarax-caddeyn adag oo leh muraayada hore ee baabuurta. Caadi ahaan albaabka muraayadda waa muraayad laba jibbaaran oo ka buuxan Argon, Krypton waa ikhtiyaari. Glazing Triple waxaa loogu talagalay isticmaalka qaboojiyaha, shaqada kululaynta waa ikhtiyaari. YB Bright Sliver Glass Door wuxuu la kulmi karaa shuruudaha heerkulka laga bilaabo -30 ℃ -10 ℃, goomaha leh magnet xoog leh ayaa ka hortagi kara daadashada hawo qabow iyo awood-karti badan. Qaab-dhismeedka wuxuu noqon karaa PVC, aluminium aluminium ah, bir bir ah oo leh midab kasta oo aad jeceshahay inaad ku daboosho baahidaada suuq ee kala duwan ama dhadhanka. Recessed, Add-on, Gacan buuxda oo dheer ama la habeeyay ayaa sidoo kale noqon kara barta bilicsanaanta.